U Kyaw Moe Tun Hero of Spring Revolution (True Story) – PVTV Myanmar
·3months ago ·37 Comments
ပြည်သူ့ အာဏာ says:
2021-10-20 at 8:53 AM
🙏🙏🙏We Respectfully U Kyaw Moe Tun 🙏🙏🙏
ဒေါ် ခင်လုံး says:
2021-10-20 at 9:27 AM
NgeNge Htun says:
2021-10-20 at 9:39 AM
အရမ်းချစ်ရပါသော ကျမတို့၏ သံအမတ်ကြီး လေးစားစွာဖြင့်🙏
Ya Mim Myo says:
2021-10-20 at 9:59 AM
🙏🙏🙏👍👍👍🙏🙏🙏🌟🌟🌟🌟❤❤❤❤🌟🌟🌟for Myanmar PEOPLE'S .
Hla Hla Win says:
2021-10-20 at 11:03 AM
Thiri Sandar says:
2021-10-20 at 11:42 AM
HTARHTAR NWE says:
2021-10-20 at 12:31 PM
ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်တာတွေလုပ်လိုက် ၊ နောက်ကျရင် ခြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ ပြောလိုက်နဲ့ ရှုပ်ထွေးနေပါတယ်။
ကလပ်တိုကရေစီ အစိုးရတစ်ရပ်၏ သက်ရောက်မှုများ အနေဖြင့် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးကိစ္စများနှင့် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးများကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေသည်။ ကလပ်တိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အလားအလာများကို ပျက်စီးစေပြီး ပြည်တွင်းစျေးကွက်နှင့် နယ်ခြားဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်မှုတို့ကိုလည်း အကြီးအကျယ် ချည့်နဲ့စေသည်။ ကလပ်တိုကရက်များသည် အခွန်အတုတ်များမှ ရရှိသော ဘဏ္ဍာငွေများကို တလွဲအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငွေကြေးခဝါချမှု လုပ်ငန်းစဉ်၌ အကြီးအကျယ် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းတို့ဖြင့် ပြည်သူတို့ထံမှ ငွေများကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပြီး နိုင်ငံသားတို့၏ ဘဝအရည်အသွေးကို အကြီးအကျယ် ကျဆင်းစေသည်။
ကလပ်တိုကရက်များက ခိုးယူလိုက်သော ငွေကြေးများသည် ဆေးရုံနှင့် စာသင်ကျောင်း အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းများနှင့် ပြည်သူ့ပန်းခြံများ ကဲ့သို့သော အများပြည်သူ ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ္ဍာငွေများကို လမ်းလွဲရောက်ရှိ သွားစေသောကြောင့် နိုင်ငံသားတို့၏ ဘဝအရည်အသွေးကို ကျဆင်းစေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကလပ်တိုကရက် အီလစ်များမှနေ၍ အလွန်အမင်း ချမ်းသာသော လူနည်းစု အလွှာတစ်ရပ် ထွန်းကားလာခြင်းက ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပျက်စီးစေသည်။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံသားတို့၏ ဘဝအရည်အသွေးကို အကြီးအကျယ် ကျဆင်းစေပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဖျက်ဆီးနေသည့် ကလပ်တိုကရက်များသည် နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူတို့၏ နံပါတ် – ၁ ရန်သူများပင် ဖြစ်ပါကြောင်း
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ငွေဘယ်လောက် ဖွက်ထားကြလဲ
ငွေဘယ်လောက်ဖွက်ထားတယ်ဆိုတာအတိအကျ မပြောနိုင်ပေမယ့် ၅.၆ ထရီလျံ ဒေါ်လာကနေ ၃၂ ထရီလျံလောက်ရှိမယ်လို့ ICIJ ရဲ့ အပြောအရ ခန့်မှန်းလို့ ရပါတယ်
Zin Linn Oo says:
2021-10-20 at 1:19 PM
Roi San says:
2021-10-20 at 2:29 PM
RMT Khaing says:
2021-10-20 at 2:32 PM
Phonesu Century says:
2021-10-20 at 3:07 PM
အဲဒိနေ့ည UN Live ကိုကြည့်နေတုန်း ဆို့နင့်နေတဲ့ အသံနဲ့ပြောသွားတာကြည့်ပြီး မျက်ရည်ကျခဲ့ရပါတယ်။လေးစားဂုဏ်ယူရပါသော သံအမတ်ကြီး ကျန်းမာချမ်းသာ စွာနဲ့နိုင်ငံတာဝန်တွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။
thanthan win says:
2021-10-20 at 3:28 PM
2021-10-20 at 3:32 PM
Daw Khaing says:
2021-10-20 at 3:57 PM
Thu Maung says:
2021-10-20 at 4:15 PM
Tub KoobHmoovTsaab says:
2021-10-20 at 4:51 PM
thanks all the saving of you .U kyaw Moe Tun.
2021-10-20 at 6:49 PM
Brave Brave says:
2021-10-20 at 9:09 PM
Zawlay Bama says:
2021-10-20 at 10:35 PM
Zaw Zaw zaw says:
2021-10-20 at 11:38 PM
Esther Huai says:
2021-10-21 at 7:55 AM
2021-10-21 at 8:02 AM
Hwte Hwte Myint says:
2021-10-21 at 8:15 AM
Thu Eaindra says:
2021-10-21 at 10:39 AM
ဦးကျော်မိုးထွန်း ကျေးဇူးပါ တကယ်တော်တယ် တကယ်ဂုဏ်ပြုတိုက်တယ် ဦးရေ ကျန်းမာပါစေကျန်တဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စ လဲ ပြီးစီးအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ကျေးဇူးပါ🙏🙏🙏🙏🙏🙏💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
Than Htet says:
2021-10-21 at 4:39 PM
Seang Hom says:
2021-10-22 at 2:42 AM
သံအမတ္ျကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း က်န္းမာခ်မ္းသာျပီး ေဘးကင္းပါေစ 🙏🙏🙏
2021-10-22 at 6:37 AM
PDF = R2P
ရပ်ရွာ တိုင်းက ပြည်သူ တွေရဲ့
ပြည်သူ့ရဲ..က တရားမျှ တစွာအကာ အကွယ် မပေးလို့
ရပ်ရွာ.. ပြည်သူ ကို ကာကွယ်ဖို့
ပေါ် ပေါက် လာတာ..
PDF ရဲ့ အဓိက အလုပ်ဟာ
လာရောက် မွှေ နှောက် သောင်းကြမ်းနေတဲ့..စစ် ရဲ အရေခြုံ
ရပ်ရွာ ပြည်သူ ကို..
လာဖမ်း..နှိပ်စက် သတ်ဖြတ် နေတဲ့..ဖက်ဆစ် ဘောမ စစ်ခွေးတွေ..
ရပ်ရွာ ကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးတဲ့
မအလ/စကစ စစ်ဆေး ရေး
ဒီစစ်ရေခြုံ..ဒပြတွေရဲ့…လက်ထောက်ချ ဒလံ တွေ…
ဒါတွေ ကို ရှင်းလင်း ဖို့က အဓိက..
ရပ်ရွာ တခု ရဲ့ PDF နဲ့ မနိုင် ရင်
တမြို့ နယ်လုံး မှာ ရှိတဲ့ PDF တွေပူးပေါင်း တိုက်…
တမြို့နယ် လုံး ရှိ PDF နဲ့မနိုင် ရင်
တပြည်နယ်/ တိုင်းလုံး မှာ ရှိတဲ့
PDF တွေ ပူးပေါင်း တိုက်..
နည်းစပ်ရာ..EAO တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး..အကူအညီ..ယူတိုက်..
ပြည်နယ်ပေါင်းစု PDFs + EAO
= ထို ပြည်နယ် တိုင်းရဲ့..အနာဂတ်
ဖက်ဒရေး ရှင်း Army ဘဲ..
ဒါကြောင့်.. EAO များ..ဖက်ဒရေးရှင်း ကို တကယ်လို ချင်ရင်..
မိမိ တိုင်းပြည်နယ် တွင်းရှိ
ရပ်ရွာ ထဲက ပြည်သူ တွေ..ခွေးဆွဲခံ နေရသရွေ့..အဲဒီရပ်ရွာ..မြို့နယ်.. ရဲ့ PDFs တွေရဲ့..အားနဲ ချက်ဖြစ် သလို..အဲဒီ တိုင်း ပြည်နယ် မှာ လှုပ်ရှား နေတဲ့
EAO တွေရဲ..စေတနာနဲ့..အားနည်းချက် တွေဖြစ်လို့…
မိမိ အားနည်းချက် ကို မိမိ ကိုယ်မိမိသိပြီး..ပြုပြင်ကြပါ…
မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ.. အခြေချ ထားတဲ့
မြန်မာ စစ်တပ် များ ကို သွားတိုက်ခြင်း ထက်…
ပြည်သူ ကို..လာရောက် ဒုက္ခပေး နေတဲ့..လူသတ်..ပစ္စည်း လု လုပ်နေတဲ့..စစ် ရဲအရေခြုံ ..ထောင်ထွက် ဒပြတွေကို
ရွေ့လျား နေတဲ့..ဖက်ဆစ် ဘောမ
တပ်တိုင်း ကို..မြို့ဝင်/ မြို့ထွက် တွေက စောင့်ပြီးရှင်း…
ပြည်သူ ကိုဒုက္ခ ပေး ဖို့ လုပ်နေတဲ့
check point ကင်းစခန်း တွေကို
ပြည်သူ တွေကို အကာအကွယ် မပေးတဲ့..ရဲစခန်း တွေကို..ညမှာ တက်သိမ်း..လက်နက်ယူ..
PDF ကို လက်နက် တပ်ဆင်..
PDFs တွေဟာ..မြေအောက် လှုပ်ရှား မှု အနေနဲ့..အမြဲရှိပြီး
တော်လှန်ရေး အောင်မြင် သည်ထိ..ပျောက်ကြား..စနစ်ကို ကျင့်သုံးပြီး..အထိအခိုက်.. အပျောက် အရှ နဲ အောင်..သမရိုးကျ.. တိုက်ပွဲများ ကို..စဦးပိုင်း မှာ
ရှောင်ရှားကြ..တိုက်ခိုက် ရေး ကျွမ်းကျင် အောင်..တိုက်ရင်း လေ့ကျင့်..လေ့ကျင့် ရင်း တိုက်ခိုက် သွားကြ..
ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲ များ.တတ်နိုင် သလောက် ရှောင်..
ခြုံခို တိုက်..ပစ် ပြေး ပုန်း ပစ်..
စနစ် ကို သုံး..
PDF = R2P..
thandar min says:
2021-10-22 at 6:54 AM
U Ko Gyi says:
2021-10-22 at 7:19 PM
က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာ ျပည္သူ ေတြယံုၾကည္ေလးစား ရတဲ့ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာ ေဘးဘရာေဝးကြာပီး အခက္အခဲ အာႏၱရယ္ ရန္စြယ္မွန္သမ်ွအလြယ္တကူ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လြာွးႏိူင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ
2021-10-23 at 2:00 AM
Many thanks Sir for what you've done for our country. May you be free from danger.
Me Lay says:
2021-10-23 at 8:21 PM
ဘာေတြမွန္း ကိုမသိဘူး says:
2021-10-23 at 8:44 PM
He is one of our martyrs
2021-10-23 at 10:54 PM
ယခု တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ ေနာင္ေတာ္ ကို ေလးစားပါတယ္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ပါေစ
2021-10-24 at 10:07 AM
ပြည်သူ လူ ထု က ပေးသေါ ကျိန် ဒန် မူချ ခံရမည်. .ခံရပြီ ဇတ်သိမ်းခန်းစပါပြီ အိမ်နီခြင်း ပြီသပါစေတတည်း .ပြည်သူအါးကိုး။ ပြည်သူ့သါးကေါင်းရတနါ ပြည်သူသါး စစ် .. စစ်သါး ဖြစ်လိုသည်. God bless you sir Oo kyaw mo thun .
tun linlin says:
2021-10-24 at 12:00 PM
ma ma Lay says:
2021-10-25 at 7:02 AM
Thit Wint says:
2021-10-27 at 7:20 PM
We homage to you and really brave. 🙏🙏🙏
ဓမ္မကိုဂုဏ်ပြု ပူဇော်ပြီး အဓမ္မကိုလောင်ကျွမ်းမည့် တော်လှန်ရေးသီတင်းကျွတ်သပိတ် ကိ